Filtrer les éléments par date : jeudi, 28 novembre 2019
jeudi, 28 novembre 2019 20:14
Eliace Ralaiarimanana: « Midika ho faharesen’ny fanjakana ny tsy fahatongavan’ny olona nifidy »
Nisafidy ny tsy mbola haneho hevitra mikasika ny fifidianana kaominaly ny tenako, hoy i Eliace Ralaiarimanana, kandida Ben’ny tanàna tsy miankina teto Antananarivo Renivohitra. Misy ny fotoana hitenenana hoy izy, na izany aza « midika ho faharesen’ny fanjakana ny tsy fahatongavan’ny olona nifidy ireny », araka ny nambarany.
« Fampiharana ny lalàna », izay no famerimberin’i Eliace Ralaiarimanana tamin’ireo adihevitra nifanaovan’ny samy kandida sy ny fanehoan-keviny rehefa nivahiny tamin’ny haino aman-jery nandritra ny fampielezan-kevitra.
jeudi, 28 novembre 2019 19:55
CNAPS: Mandray ny asany ny Tale jeneraly vaovao, Rakotondraibe Mamy
Notanterahina androany teny amin’ny foiben’ny CNAPS tetsy Ampefiloha ny lanonana fifamindra-pahefana teo amin’ny Tale jeneraly vonjimaika Rtoa Tsaboto Joslina sy ny Tale jeneraly vaovao Rakotondraibe Mamy.
jeudi, 28 novembre 2019 19:05
Vola: Mifarana amin’ny 31 desambra 2019 ny fampiasana ireo ravim-bola navoaka ny taona 2003 sy 2004
Namoaka didim-panjakana ny Filan-kevitry ny Governemanta nivory ny talata 26 novambra 2019 lasa teo, milaza fa mifarana amin’ny 31 desambra 2019 ny fampiasana ireo ravim-bola 10 000 Ariary, 5 000 Ariary ary 2 000 Ariary izay navoakan’ny Banky Foiben’i Madagasikara araka ny didim-panjakana laharana faha 2003-781 natao ny 8 jolay 2003 sy ny ravim-bola 1 000 Ariary, 500 Ariary, 200 Ariary ary 100 Ariary, izay navoakan’ny Banky Foiben’i Madagasikara araka ny didim-panjakana laharana faha 2004-1040 natao ny 23 novambra 2004.
jeudi, 28 novembre 2019 19:03
Babà Rakotoarisoa: "Leo politika maloto ny olona"
"Leo politika ny olona ary leo ny politika maloto", hoy i Rakotoarisoa Faniry Alban na Babà Rakotoarisoa taorian'ny fifidianana kaominaly natao omaly, izay ambany dia ambany ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy.
Kandida Ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra, amin'ny anaran'ny APM (Antoko Politika Madio) i Babà Rakotoarisoa.
jeudi, 28 novembre 2019 15:24
Kaominina Alasora: Niarahaba an'i Jimmy Randriantsoa lany soa amantsara i Marc Ramiarinjatovo
Nisaotra ireo mpikambana MDV (Madagasikara Vaovao) tamin’ny fandraisana andraikitra sy ireo nanohana azy tamin’ny fifidianana kaominaly i Marc Ramiarinjatovo, Ben’ny tanàna teo aloha tao amin’ny Kaominina Alasora, Distrika Antananarivo Avaradrano ary kandida tamin’ny fifidianana natao omaly 27 novambra.
Miarahaba an'Atoa Jimmy Randriantsoa, mpifaninana taminy ihany koa i Marc Ramiarinjatovo, « lany soa amantsara ary mirary azy hahavita soa ny asa hapetraky ny vahoaka aminy ».
Kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara i Jimmy Randriantsoa. Lefitry ny Ben’ny tanàna nandritra ny efa-taona nitantanan’i Marc Ramiarinjatovo an’i Alasora.
jeudi, 28 novembre 2019 15:01
Fanendrena Governora: « Mifanaraka amin’ny Lalampanorenana », hoy ny HCC
Namaly ny taratasy fangatahan’ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, tamin’ny 5 novambra 2019, ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, raha toa ka mifanaraka na tsia amin’ny Lalampanorenana ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019 nanendrena ireo Governora.
Tamin’ny fanapahana 17-HCC/D3 navoakany androany 28 novambra 2019 no nilazan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalampanorenena ny fanendrena Governora voarakitry ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019.
Vonjimaika ihany ny fanendren’ny fitondrana foibe ny rafitra mpanatanteraka eny anivon’ny Faritra, mandrampametrahana ny satan’ny vondrombahoakam-paritra ary fomba fiantso ny « lehiben’ny Faritra » fotsiny ihany ny hoe : « Governora », tsy mifanohitra amin’ny voalazan’ny Lalampanorenana.
Governora miisa 11 no efa voatendry tamin’ny andiany voalohany, mety ho alohan’ny faran’ity taona ity ny fanendrena ireo ambiny.
jeudi, 28 novembre 2019 14:37
Feno Harison: « Marobe ny lesoka amin’ny fifidianana »
Nisaotra ireo rehetra nisafidy azy i Feno Harison, kandida tsy miankina tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra. Tamin’ny tambazotra sosialy facebook no nanaovany fanambarana androany. « Amin’ny maha-teknisiana ny tenako », hoy izy no nisafidianan’ny olona azy.
Nanipika mazava i Feno Harison fa tena ambany ny taham-pandraisana anjaran’ny mpifidy tamin’iny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina notanterahina ny alarobia 27 novambra 2019 iny ary « marobe ny lesoka amin’ny fifidianana ».
jeudi, 28 novembre 2019 11:09
SECES: Hanao fivoriambe rahampitso zoma 29 novambra
Nampihantona ny fitokonany ary nampihemotra izany ho amin’ny fotoana manaraka ny SECES noho ny fifidianana Ben'ny tanàna sy Mpanolontsaina, izay natao nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny tontolo andron’ny alarobia 27 novambra 2019.
Hanao fivoriambe ny SECES rahampitso zoma 29 novambra 2019 handinihana ny tohin’ny fitakiana sy ny endrika hisehoan’izany.
jeudi, 28 novembre 2019 11:06
Guy Rivo Randrianarisoa: « Resy aho teto Antsirabe »
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Guy Rivo Randrianarisoa, androany, milaza fa « Resy aho teto Antsirabe raha ny vokatra vonjimaika. Izaho manaja ny vokatra sy ny feom-bahoaka na inona na inona zava-miseho »
Notsiahiviny fa « fitiavako hanarina ity tananantsika ity no nilatsahako ary izay hampandroso azy no faniriako », ka isaorany ireo rehetra nifidy sy nanampy azy.
« Mionona sy miandry zavatra hafa ny ankamaroan’ireo mpiaradia amintsika ary tsy marisika amin'ny fifidianana intsony », hoy hatrany ny fanambaran’ity kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara, tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antsirabe renivohitry ny Faritra Vakinankaratra ity.
Mirary soa ny mponin’Antsirabe hahazo zava-tsoa ny tenany. « Izaho moa efa niverina eto ary efa manana orinasa eto koa dia miaraka eto foana isika », hoy i Guy Rivo Randrianarisoa namarana ny teniny.